I-BWC074-Ubunzima bokuKhanya okuMncinci kwiKhamera yeWall Worn [Akukho Screen ye-LCD] -Izisombululo ze-OMG
Iqhosha langaphambili leRekhodi - Iqhosha elikhulu lokurekhoda ngaphambili yinto elungileyo efunwa ngabathengi abaninzi, njengoko kulula ukufumana iqhosha le-REC ukuqala ukurekhoda, isitshixo esinye sokurekhoda.
Malunga neeyure ezili-12 zokutshintsha kwebhetri epheleleyo ye-720P - Ngenxa yezisombululo ze-H22 ekusebenziseni amandla asezantsi. Esi sixhobo senza ibhalansi enkulu phakathi kobomi bebhetri kunye nobungakanani bekhamera. Yiyo loo nto ikwazi ukurekhoda iiyure ezili-12 ngokuqhubekayo ukurekhoda ubomi bebhetri!
I-LCD ephezulu - I-LCD encinci ephezulu ukubonisa ukuGcina, ibhetri, imeko yokurekhoda, iWIFI.
1440p isisombululo sevidiyo esipheleleyo- Isisombululo sevidiyo se-1440P kunye ne-140 degrees yendawo yokujonga yenza iMera-Worn Camera ibe sisixhobo esihle sokufaka into oyibonayo / oyifunayo.
Ukukhanya okungafunekiyo umbono omkhulu wasebusuku- Ukurekhodwa kombono we-infrared ebusuku. Ukuya kwi-10 Iimitha ezinomfanekiso wobuso obonakalayo.
H.265 kunye ne-H.264 ukufaka iikhowudi kwividiyo- Esi sixhobo samkela isisombululo seAmbarella H22 samvanje ngetekhnoloji yeH.265. I-H.265 iya kwenza ividiyo yekhamera malunga ne-50% encinci kunevidiyo ye-H.264
Nceda ujonge uthelekiso phakathi koxinzelelo lwevidiyo lwe-H.265 kunye ne-H.264 njengezantsi:
Ukurekhoda ifayile e
Ukurekhoda ubungakanani befayile
/ ngeyure nganye (GB)
Ividiyo eyi-H.265 iphantse ibe sisiqingatha sevidiyo ye-H.264, ebonisa ukuba umsebenzisi angasebenzisa ikhadi le-32GB SD ukuba lisetyenziswe njengekhadi le-64GB SD.
7570 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-1 Namhlanje